कार्तिक १० गते २०७६
लक्ष्मी पूजा कसरी गर्ने ? (विधिसहित)
हामी लक्ष्मीको उपासना गरेर लक्ष्मी भित्र्याउदैछौं । समुन्द्र मन्थनबाट प्रकाट्य भएकी भगवती लक्ष्मी हात्तीद्धार सोभित भएकी छिन् । उल्लुको बाहन भएकी लक्ष्मीको हामी पूजा गर्दैनौं । अहिले बजारमा उल्लुमा सवार लक्ष्मीको फोटा पाउन छोडिएको छ । पहिले पहिले उल्लुमा विराजमान भएकी लक्ष्मीको पूजा हुने गर्दथ्यो । तर उल्लुमा सवार लक्ष्मीको पूजा गरे शुभ नहुने ज्योषशास्त्रले बताएको छ । पूजा गर्ने तरिका १. सर्वप्रथम स्नान गरेर घर लिप्ने ठाउँ भएमा गाईको… पुरा पढौ
लक्ष्मी पूजा भोलि (११ गते) होइन, आजै हो
यमपञ्चक अर्थात तिहारको तेस्रो दिन आइतबार बेलुका ऐश्वर्य, धन–धान्य र सम्पन्नताकी देवी लक्ष्मीको पूजा आराधना गरी श्रद्धा भक्तिपूर्वक लक्ष्मीपूजा मनाइँदैछ । सफासुग्घर र लिपपोत नगरिएको घरमा लक्ष्मीले बास गर्दिनन् भन्ने मान्यताका आधारमा बिहानै घर सफा सुग्घर र गाईको गोबर एवं रातो माटोले लिपपोत गरी दीपावली गरेर लक्ष्मीलाई आमन्त्रण गरिन्छ । विशेषगरी घरका झ्याल, ढोका, चोटा, कोठा, सङ्घार, कौसी, अटाली र भर्याङलगायतका स्थानमा सरसफाइ गरी दीपावली गरिन्छ । लक्ष्मी पूजा गरिने… पुरा पढौ
आज कुकुर पूजा गरिँदै
आज यमपञ्चकको तेस्रो दिन अर्थात, कुकुर तिहार । कुकुरको पूजा तथा मीठामीठा खानेकुरा खान दिई मनाइँदैछ । कुकुर तिहार यमपञ्चक अर्थात् दीपावली पर्वको दोस्रो दिन पर्ने भए पनि यस वर्ष तिथिको घटबढका कारण तेस्रो दिन पर्न गएको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ । कार्तिक कृष्ण चतुर्दशीका दिन कुकुरलाई मीठामीठा परिकार खान दिए यमराजको ढोकामा द्वारपालका रुपमा बस्ने श्याम र सबल नामका कुकुरले यमलोक जाँदा बाटो छोडिदिने धार्मिक विश्वास छ… पुरा पढौ
आजको राशिफल (२०७६ कार्तिक १० गते आइतबार)
आजको पञ्चांग आज मिति २०७६ कार्तिक १० गते आइतबार, इस्वीसंवत अक्टोवर २७ तारिक सन् २०१९, श्री शालीबाहनीय शाके १९४१, नेपाल संवत् ११३९, परिधावीनामः संवत्सरः, सूर्य पृथ्वीको दक्षिणी गोलार्द्धमा छन् । शरद ऋतु चलिरहेको छ । चान्द्रमान अनुसार कार्तिककृष्णपक्ष चलिरहेको छ । सौरमान अनुसार आज कार्तिककृष्णपक्षको चतुदर्शी तिथि अहोरात्र रहनेछ । आज चित्रा नक्षत्र रहनेछ । विष्कुम्भादि योगमा विष्कुम्भ, करणमा शकुनी रहनेछ भने आनन्दादि योगमा पद्य रहनेछ । सूर्य तुला राशिमा,… पुरा पढौ
तिहारका ५ दिन : यस्ता छन् बुझ्नै पर्ने विशेषता
हिन्दू नेपालीहरूको दोस्रो ठूलो चाड तिहार पर्व कात्तिक कृष्ण त्रयोदशीदेखि कात्तिक शुक्ल द्वितीयासम्म मनाइने गरिन्छ । तिहारमा पिङ खेल्ने, दीपावली गर्ने, देउसीभैलो खेल्दै सेलरोटी आदि मिष्ठान्न खाई रमाइलो गरी तिहार मनाउने गरिन्छ । कार्तिककृष्ण त्रयोदशीदेखि कार्तिकशुक्ल द्वितीयासम्मका ५ दिन मनाइने भएकाले यसलाई यमपञ्चक भन्ने गरिन्छ । कात्तिककृष्ण त्रयोदशीदेखि कात्तिक शुक्ल द्वितीयासम्म यमराज पनि आफ्ना दैनिक काम स्थगित गरी बहिनी यमुनाकहाँ अतिथिका रुपमा बसेर भाइटीका ग्रहण गर्ने भएकाले यस पर्वलाई यमपञ्चक… पुरा पढौ
आजको राशिफल (२०७६ कार्तिक ९ गते शनिबार)
आजको पञ्चांग आज मिति २०७६ कार्तिक ९ गते शनिबार, इस्वीसंवत अक्टोवर २६ तारिक सन् २०१९, श्री शालीबाहनीय शाके १९४१, नेपाल संवत् ११३९, परिधावीनामः संवत्सरः, सूर्य पृथ्वीको दक्षिणी गोलार्द्धमा छन् । शरद ऋतु चलिरहेको छ । चान्द्रमान अनुसार कार्तिककृष्णपक्ष चलिरहेको छ । सौरमान अनुसार आज कार्तिककृष्णपक्षको त्रयोदशी तिथि अहोरात्र रहनेछ । आज उत्तराफाल्गुणी नक्षत्र रहनेछ । विष्कुम्भादि योगमा वैधृति, करणमा वणिज रहनेछ भने आनन्दादि योगमा उत्पात रहनेछ । सूर्य तुला राशिमा,… पुरा पढौ
तिहार शुरु, आज काग तिहार
यस वर्षको तिहार अर्थात् यमपञ्चक आज शुक्रबारदेखि शुरु भएको छ । नेपाल पञ्चांग निर्णायक समितिले कात्तिक ८ गते शुक्रबारदेखि यमपञ्चक शुरु भएको जनाएको हो । शुक्रबार यम दीपदान हुँदैछ । समितिका सदस्य सचिव सूर्यप्रसाद ढुंगेलले यसअघि नै विज्ञप्ति जारी गर्दै कात्तिक ८ गते शुक्रबारदेखि यमपञ्चक सुरु हुने जनाएको थियो । समितिका अनुसार कात्तिक ९ गते शनिबार कागतिहार, कात्तिक १० गते आइतबार कुकुर तिहार र लक्ष्मीपूजा, कात्तिक ११ गते सोमबार गाईगोरु… पुरा पढौ
आजको राशिफल (२०७६ कार्तिक ८ गते शुक्रबार)
आजको पञ्चांग आज मिति २०७६ कार्तिक ८ गते बिहीबार, इस्वीसंवत अक्टोवर २५ तारिक सन् २०१९, श्री शालीबाहनीय शाके १९४१, नेपाल संवत् ११३९, परिधावीनामः संवत्सरः, सूर्य पृथ्वीको दक्षिणी गोलार्द्धमा छन् । शरद ऋतु चलिरहेको छ । चान्द्रमान अनुसार कार्तिककृष्णपक्ष चलिरहेको छ । सौरमान अनुसार आज कार्तिककृष्णपक्षको द्धादशी तिथि अहोरात्र रहनेछ । आज पूर्वाफाल्गुणी नक्षत्र रहनेछ । विष्कुम्भादि योगमा ब्रहम, करणमा तैतिल रहनेछ भने आनन्दादि योगमा सिद्धि रहनेछ । सूर्य तुला राशिमा,… पुरा पढौ
कागको पूजा किन गर्ने ? (यस्ता छन् रोचक प्रसंग)
यमपञ्चक समेत भनिने तिहारको ५ दिनमा क्रमैसँग काग, कुकुर, गाई, गोरु र आफना दाजुभाईको पूजा गरिन्छ । तिहार पर्व कात्तिक कृष्ण त्रयोदशीदेखि कात्तिक शुल्क द्वितीया तिथिसम्म गरि ५ दिन मनाइन्छ । यसको सुरुवात कात्तिक कृष्ण त्रयोदशीको दिन मनाइने काग तिहारबाट हुन्छ । तिहारको पहिलो दिनमा यमराजको दूत कागको पूजा गरिन्छ । काग तिहारको दिनमा यमराजको सन्देश वाहकको रुपमा कागलाई सम्मानको साथ पूजाआजा गरेर खानेकुरा दिने चलन छ । हाम्रो नेपाली… पुरा पढौ
भाइटीकाको साइत कुन देशमा कति बजे ?
अन्तर्राष्ट्रिय पञ्चाङ्ग निर्णय समितिले यही कात्तिक १२ गते (अक्टोबर २९)को भाइ टीकाको साइतको समय ठाउँअनुसार फरक फरक तोकेको छ । यसअघि दसैंको साइतसमेत सो समितिले यसैगरी तोकेको थियो । त्यतिबेला कतिपय देशमा टीकाको साइतको दिन नै फरक परे पनि यसपालि भने एउटै तिथीमा भाइटीका परेको छ तर समय भने फरक रहेको छ । सो समितिको बैठकपछि सभापति प्रा.डा. माधव भट्टराई र सदस्य सचिव आचार्य सन्तोष बशिष्ठद्वारा जारी गरिएको संयुक्त वक्तव्यमा… पुरा पढौ